Olee otú ige ntị music na Spotify mobile
Na-ege ntị Music na Spotify mobile bụ a mesmerizing mmetụta inwe. Na Spotify Mobile, nhọrọ Ka ịkpọgharịa ọ bụla playlist ma ọ bụ na-ese 's katalọgụ dị tinyere ihe owuwu ike gị playlist. The isi mma nke Spotify mobile bụ nnweta nke ọtụtụ nde songs na ya. Na Spotify Mobile, ị nwere ohere nke ọtụtụ nde ndị Music n'ime gị n'akpa uwe na ikekwe ị bụ ihe ndị kasị ekele onye na-nwere ndị dị otú a nnukwu collection nke music.
Nkebi nke 1: Olee otú iji nweta Spotify ngwa
Part 2: Olee na-ege ntị Spotify iyi site Spotify mobile on ios / iPhone online
Nkebi nke 3: Olee otú ige ntị Spotify iyi site Spotify mobile on android online
Nkebi nke 4: Download ka mobile na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị
Download Spotify music free na TunesGo ka mobile na-ege ntị na-anọghị n'ịntanetị
The Spotify ngwa nwere ike ibudata si ukara website nke Spotify. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ na nyiwe maka nzube nke download dabere na n'elu ikpo okwu, ndị ọrụ ma ọ bụrụ na aiming na.
Ebe na otú ibudata ios / iphone ngwa
The Spotify ngwa n'ihi nzube nke Iphone nwere ike ibudata site na-esonụ njikọ https://itunes.apple.com/en/app/spotify-music/id324684580?mt=8. Niile ị chọrọ bụ na-emeghe iTunes na ibudata ngwa. Mezue usoro nke Registration na Spotify ma ọ bụ nbanye na depending.Through ojiji nke itunes ngwa ahịa, na Spotify ngwa nwere ike ezi mfe ibudatara na na nhọrọ na nbanye si Facebook bụ kwa ugbu na ọrụ.
Ebe na otú ibudata android ngwa
N'ihi nzube nke Android, na Spotify ngwa nwere ike ibudata site na njikọ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music&hl=en. Ihe niile ị chọrọ ịga a njikọ na pịa na njikọ na gị download amalite. The ngwa pụrụ ịbụ nnọọ mfe inweta na Google Play ụlọ ahịa. Mgbe ahụ, ị na-achọrọ aha on Spotify akaụntụ ma n'ụdị Free, ọnwụnwa ma ọ bụ adịchaghị. Ị nwekwara nhọrọ nbanye site na Facebook ma ọ bụ site na akaụntụ gị nkọwa.
Na-ege ntị Spotify Stream site Spotify Mobile on ios ma ọ bụ iPhone online, ihe niile ị chọrọ bụ ios ngwaọrụ ma ọ bụ iPhone ngwaọrụ. Iji na-egwu music ị chọrọ bụ enweta na ngwa. The album artwork-egosi ka anya dị ka ị na-enweta na ya, na track amalite na-akpọ. Ị nwere nhọrọ slide mkpịsị aka gị tinyere usoro iheomume na ala iji na-awụlikwa elu ọ bụla ụfọdụ akụkụ nke track. -Echeta mgbe nile otu eziokwu, na ọbụna Ọ bụrụ na ị wepuÚ Spotify ngwa na iPhone, na music na-akpọ. N'ihi nzube nke-akpali akpali nke na egwu ahụ na-akpụ akpụ na egwu ọzọ na iPhone, niile ị chọrọ bụ ka swipe album artwork site eji mkpịsị aka gị si ikike ekpe direction. Na Ileba, ị chọrọ ịga aga na track, niile ị chọrọ bụ ka laa azu ihe nke mkpịsị aka gị. Na nke a mma-ekwe ka ndị ọrụ na-conveniently eji music faịlụ na ikpe, ndị ọrụ nwere playlist nwere otutu dị iche iche iberibe album cover nkà. Dị ka ọhụrụ update, ọ nwere ike kwuru na ngwa nke Spotify bụ na pa na Android Devices. The hardcore ndị hụrụ nke a App ga-hụrụ n'anya nile mmelite nke na-abịarute na n'ụbọchị ruo n'ụbọchị.
Spotify on Android awade mobile ohere ya iyi site ya Android na iOS ngwa ogologo oge dị ka ị na-adịghị cheta ihe ndị a na shuffled. Ụzọ nke na-akpọ music bụ otu ihe ahụ dị nke iPhone ngwaọrụ. The isi dị iche bụ na na ikpe nke na exiting si Spotify ngwa na Android, ị nwere nhọrọ ịhụ track na nke ahụ na-egwuri egwu na ngosi mmanya n'ụlọ n'elu nke ihuenyo, ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị n'ezie na ngwa. Ihe i nwere ike ime bụ slide na mmanya na pịa na music ma laghachi na ngwa ọzọ na-eme ihe ọ bụla mgbanwe dị ka kwa uche gị.
Na-ugbu bụ nifty music-ọkpụkpọ wijetị nke e dere ụfọdụ isi playback njikwa. N'elu ịpị na ya, ị pụrụ nnọọ mfe-aga azụ ka Spotify ngwa ọzọ. Ọ bụrụ na, na ị chọrọ ịkwụsị track si akpọ, mkpa ka ị enweta na kwụsịtụ button, nke na-egosi ebe Play button bụ (m kwere m bụghị na ike ka i). Ịkwụsịtụ bụ otu ihe ahụ dị ka nkwụsị a track; e nweghị kpọmkwem Kwụsị button dị. Iji Ikwu na egwu ọzọ na gam akporo dị nnọọ ka iPhone, niile ị chọrọ bụ ka dị nnọọ swipe album artwork site na iji eji atụmatụ nke mkpịsị aka gị si ikike ekpe. N'ihi nzube nke na-aga aga na track, i kwesịrị laa azu na usoro nke ije nke mkpịsị aka gị. Usoro a nwere ike kwuru dị ka otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị mgbe ọrụ nwere playlist nwere otutu dị iche iche iberibe album cover nkà.
Spotify Music ike ga-eji na Mobile n'ihi nzube nke na-ege ntị music offline. Na-ewere ihe atụ bụrụ na nke akporo ekwentị, ọ nwere ike mere offline site na isoro n'okpuru kwuru nzọụkwụ:
Enweta nhọrọ button
N'okpuru playback, ịgbanwee-anọghị n'ịntanetị mode on (green).
Syncing albums azọpụta Music pụkwara mere.
Na ikpe nke iPhone, ọ ga-mere na-esonụ otú:
Tụgharịa na-anọghị n'ịntanetị na ọnọdụ na Ntọala na mgbe ahụ playback na enweta na mgba ọkụ ke n'elu.
N'ihi nzube nke Emmanuel, usoro nwere ike soro dị ka n'okpuru:
Tụgharịa na-anọghị n'ịntanetị na ọnọdụ na Ntọala na playback na tapping ngbanwe ke n'elu.
Otú ọ dị, otu onye ga-echeta mgbe niile na ihe owuwu ndị offline music na-ege ntị bụ adịghị na Free akaụntụ ejiri nke Spotify. Ma, n'ihi na adịchaghị ejiri nke Spotify ngwa, na ihe owuwu na-ege ntị songs offline n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla nke oge dị.
Ị Maara a Spotify Ime Control?
Onwe gị obi ụtọ na Spotify Radio n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla
Olee otú ọtụtụ N'ókèala Spotify ebupụta na Access Spotify ebe ọ bụ adịghị
Ị Maara ndị a ụzọ na-Spotify Onyinye Kaadị
> Resource> Spotify> Olee na-ege ntị Music na Spotify Mobile